Ny cashless tsikombakomba - TENY MIALOHA | Apg29
Mpampiasa vola madinika aseho toy ny zazakely izay tsy mahalala ny tsara.
Efatra lehibe "cashless Biby Goavam" (Mastercard, Visa, American Express sy fisakafoana hariva Club) no navela hahazo ny hanorotoro predominance ny Tandrefana ny vola. Tsy ny tenany ihany kontantlösheten izay ratsy fa koa ny rafitra ara-toekarena izay ao ambadiky io.
Dia izao hamoaka ny Cashless tsikombakomba amin'ny "Cash ihany" eto an-serialized Apg29. Ny boky tsy azo miorina amin'ny Baiboly sy ny finoana kristianina, fa dia tena mahaliana rehefa jerena ny fiaraha-monina ara-toekarena eran-ny fanaraha-maso araka ny Apokalypsy 13 Milaza.
Voatsabo eto cashless trangan-javatra toy ny karatra, cashless finday vola sy ny fandrosoana mankany amin'ny maniry sy ny elektronika tombokavatsa. Ny porofo maneho fa ny hoavin'ny ny vatana akaikin'ny ny fitaovana elektronika amin'ny alalan'ny famantarana sy ny vaovao dia hanompo toy ny karatra roa, mpamily ny fahazoan-dalana, pasipaoro, karatra sy ny sisa. Tsirairay ihany koa ny fampiharana cashless tsy midika izany fa tena mety ny mpampiasa (afa-tsy ny ratsy amin'ny teknolojia rehetra izany) fa amin'ny ho avy dia mahazo any an-cashless fandrika. Noho izany antony izany, ny boky miezaka ny hanome malalaka holistic jerena ny vatana akaikin'ny ny fitaovana elektronika. Kontantlösheten no fototra iorenan'ny izay matetika antsoina hoe rahalahy be ny fiaraha-monina.
Current iombonana cashless fandoavam-bola dia mitovitovy amin'ny nizara hanao na karatra, finday na ny Internet. Matetika izany no toetry ny fitambaran'ny ireo. Mifanaraka banky ny Internet banky, banky sy ny telefaonina finday banky. Ny fitomboan'ny fampiasana ireo banky naka ho fiolahana mba hampihena ny vola. Na dia mety ho hafa ny mahaliana ao anatin'ity lohahevitra ity noho ny kontantlöshet niresaka. Ohatra, ATM, vola, vola fitaterana, banky, ary ny farany nefa tsy ny kely indrindra vola. Izany hoe ny zava-drehetra dia miankina miara-. A maharitra fironana efa kely sy ny vola tsy naloan'i cashless safidy. Avy cashless fijery, ny fandoavam-bola efa kely ny Achilles ombelahin-tongony. Fandoavam-bola eo amin'ny olona (mpiara-to-mpiara fandoavam-bola) ihany koa bebe kokoa amin'ny finday sy ny fomba hafa.
Ny antitranterina eto dia amin'ny Etazonia sy Soeda ary koa ny maro hafa firenena rakotra ao amin'ny boky. Account karatra 'tafahoatra negativity Hamafisin'ny ny United States manana karatra hafahafa fahefana any Andrefana. Ny pirenena carte de crédit orinasa ivelan'i Etazonia (izay mafy koa ratsy) no fahavoazana bebe kokoa izy ireo tamin'ny farany, rehefa lanin'ny misy karatra Amerikana goavam-be. Izany no niteraka ny fanatontoloana izao tontolo izao, ary nentiny dingana iray akaiky kokoa ny cashless monopolies fandoavam-bola. Eto, MasterCard dia nanana toerana manokana satria mivantana na ankolaka lanin'ny roa Eurocard (Soeda) sy Mondex (UK).
Ny boky Misy fizarana sy ny tapa-afa-po isan-karazany ny halavany sy mba hanome ny mpamaky fiovana fa tsy maharesy lahatra loatra reraka ny lahatsoratra. Hoy ny boky ny mpisolo eo amin'ny roa lehibe mena tariby. Ny fampandrosoana ny fiaraha-monina cashless sy ny hery na ny olona, ​​indrindra fa tany Soeda sy Etazonia izay vokany ny cashless tari-dalana, na nanohitra izany. Izany no mifangaro amin'ny tsikera, toro-hevitra ho fanoherana sy ny fanehoan-kevitra manohitra ny fiaraha-monina cashless sy ny tohan-kevitra ho an'ny vola. Maro ny tombontsoa amin'ny vola. Tsy mitonona anarana izy ireo mamela ny fividianana izay tsy traceable, tsy misy antoko fahatelo no tafiditra sy ny isam-batan'olona dia afaka malalaka sy tsy misy fanaraha-maso manome vola amin'izy samy izy. Ny ankamaroan'ny olona manao ny marina. Fa ny fananganana cashless mihevitra ny olon-drehetra toy ny mpanao heloka bevava izy ireo.
Ny zava-misy avy any ivelany fa tsy miankina cashless raharaham-barotra, ny fanjakana sy ny manam-pahefana tso-drano ny tokony havela hisolo ny governemanta nasionaly dia vola vola fotsiny meloka Izy. Ny olon-drehetra dia tsy maintsy hahita ny hadalana sy mampidi-doza rehetra downright sakafo sy hery ho namokatra tanteraka ivelan'i Soeda, ary ny herin 'izany dia homena ny firenena hamokatra. Fa nitombo kontantlöshet hita diso toy ny salama fampandrosoana. Izany no tohanan'ny ankamaroan'ny fananganana. Ny ratsy kokoa raha toa ka ny iray firenena mamokatra. Kontantlöshet momba ny toy izany, rehefa Soeda Raha jerena ankapobeny ny fandoavam-bola efa teny andevo tany amin'ny United States. Cashless globalizing foana fironana paves ny lalana ho mety hoavy tsy misy fanantenana.
Ny tohan-kevitra manta be loatra dia tsy misy fampitahana ny tohan-kevitra hackneyed indrindra ho an'ny karatra sy ny kontantlöshet. Mihaona aminao eo amin'ny tena fiainana, fa tsy mieritreritra sy marani-tsaina ny olona iray izay diso fotsiny izany noho ny fandresen-dahatra vonona sorona ny hoavy fahalalahana amin'ny alalan'ny fampiasana karatra. Ity boky ity motargumenterar manta mahery tohan-kevitra. Cashless safidy foana ny fiampangana voaloton'ny angamba afa-tsy mandritra ny fotoana voafetra. Izany no fako madio ary tena karazana "tsy mora fandrobana". Cash tsy misy sarany.
Cash dia matanjaka ara-teknika, ara-teknika dia mitaky tsy misy fotodrafitrasa dia feo fitongilànana sy tsy manana ahiahy. Ny rafitra cashless no tena marefo. Mba hahazoana ny vola ambiny tsy maintsy
maka fotsiny ireo diman-jato amby fito tampina miorina ao fahatelo vatasarihana ao ny fotsy ba kiraro iray manokana olona ka handoro azy amin'ny sigara maivana kokoa. Kontantlöshet fandriana ho fandoavam-bola maneran-loza. Toy izany dia tsy afaka hitranga amin'ny vola. Cash dia fiarovana sy ny filaminana.
Ity boky ity dia natao ho tapa-ny piozila, na ny Lalàn'i Mosesy tatỳ aoriana fa manome ara-tantara, ny ankehitriny ary ny hoavy azo atao sary ny kontantlösheten mainty. Tsy misy "fotsy" kontantlöshet. Ny zava-drehetra dia mainty. Ny loharanom-baovao ampiasaina eto mba hampiseho kontantlöshetens "mamirapiratra mainty fananana" Anisan'izany ny Wikipedia, gazety lahatsoratra, ary mora azon'ny teletext vaovao ao amin'ny aterineto izay mety ho mora hita fa tsy misy andinin-tsoratra masina ho an'ireo izay te-hahalala bebe kokoa. Pure boky sy gazety kontantlöshet izay efa nampiasaina ho toy ny loharanom-baovao dia ny boky tao an-tranon'i karatra ao amin'ny Daniela Goldberg sy Lino Lars Petersson.
Ny momba ny vola sy ny kontantlöshet any Soeda Tena skewed ny lafy ratsiny amin'ny vola. Hetsi-panoherana manohitra kontantlöshet sy ny vola misy, fa tena mahalana avy amin'ny fiaraha-monina ny olona sy ny orinasa. Toy ny hoe lalàna iray ihany no hanana lafiny fitsarana ary tsy misy fiarovana. Ao amin'ny mipetraka Tsy nahafoy vola. Ny hany misy dia ny fiarovana ny kitapo mpisolovava nitsangana teo malahelo sy mangina. Ny mpahay lalàna na izany aza toa tsy mba. Fa angamba misy kely mpisolovava ny raharaha. Izy angamba no tsy lehibe noho Teskedsgumman. Fa aoka ny famotsorana ny mpahay lalàna kely mba afaka hihinana be sy sahy. Aoka ny hetsi-panoherana any Soeda manohitra kontantlöshet-maniry mafy.
Fampitahana iray hafa dia ny fitsapankevi amin'ny hery nokleary efa natao ihany ny safidy. Strong fanitarana. Ankoatra izany, ny mponina dia tsy navela hifidy na dia eny na tsia ny fiaraha-monina izany satria efa nanapa-kevitra fa ny hery nokleary (vakio kontantlösheten) dia farany haka ny angovo hafa rehetra. Ny olona ao amin'ny raharaha ny vola, ary na inona na inona hoe kontantlöshet. Fa ny fitsapankevi-bahoaka ho amin'ity tranga ity idiotic. Tsy afaka mifidy ny hametraka ny jadona (tanteraka kontantlöshet) na mitana ny demokrasia (vola). Jadona tokony tsy ho voafidy.
Raha ny Firaisana Sovietika mety efa nanana te-ho an'izao tontolo izao kaominista. Nisy zavatra tsy malemy fanahy ny Etazonia sy ny mponina efa nandray. Tsy tokony hanery ny firenena ara-politika sy ara-bola rafitra. Ary ny fitondran-tena. Fa raha ny antsika dia miezaka ny hametraka eo amin'ny sisa amin'izao tontolo izao ny rafitra ara-bola cashless sy izay mpanao fihetsiketsehana vitsy loatra. Tsy misy hafa mihitsy ho an'izao tontolo izao ny herin'ny kaominisma. Kontantlösheten dia tsy tena mikasika ny fananana karatra plastika ao amin'ny kitapom-batsy. Ankapobeny izany zavatra mampidi-doza kokoa sy lalina. Ankoatra izany, ny Etazonia genomruttne mpanjaka kontantlöshetens tsy misy mitovy ohatra eto amin'izao tontolo izao.
Banks översittaraktiga Matetika no toe-tsaina fa ny momba matotra mba hanomboka mampiasa karatra. Mpampiasa vola madinika aseho toy ny zazakely izay tsy mahalala ny tsara. Farany masaka azy ireo any amin'ny banky, ary mety ny fomba mampiasa ny potty ny tenany, izay mifanaraka amin'ny carte de crédit. Ny zava-misy sy ny heviny mahazatra fa tsy mampiseho fa momba ny fahamatorana sy ny fahatsapana ny fanoherana sy ny tsy mety mampiasa karatra. Fa ampy amin'ny fanadihadiana fototra sy ny zava-misy voafetra nanangona ny mahita fa ny zavatra rehetra momba ny banky fa "fitiavan-karena sy ny avarice.
Na ankizy kely safidy. Afaka manapa-kevitra ho an'ny tenany raha toa ka te-hihinana na avy aza ny sakafo atolotra. Manapa-kevitra raha te-hilalao miaraka amin'ny baolina na rattle. Zavatra fa olon-dehibe no avela eo amin'ny lavany tsy hifidy ny vola. Ny stroller fa ny lehibe dia lehilahy voloina itrangatranganareo lava tongotra. Ny ray aman-dreny kontantlöse tsy misy faharetana miandry ny "zaza" manomboka milalao amin'ny nihantona kilalao ahitana mitambatra lelany. Ny hareza lelany dia karatra.
Nandritra ny fe-potoana hatramin'ny 50 taona ny taonjato 80, Soeda mbola Soeda na inona na inona na dia ny ara-tsosialy na sosialista fitondrana demokratika izay nitondra. Mbola ny firenena hoe manana ny fifanampiana, ny fiarovana, sy ny fahaleovan-tena tsy nety nanao miaramila. Avy eo ny zava-drehetra nanomboka hiharatsy. Independence nanjavona bebe kokoa hatrany, fa tsy ara-bola kely indrindra amin'ny teny. Ny lany zara fanatontoloana ihany koa ny nitondra ny firenena ho mafy orina stranglehold. Ny toe-karena bebe kokoa Lasa cashless.
Riksbank nidera ny tsy miankina fironana fa loza ihany no niteraka Panaxia tantara ratsy toy ny halatra sy ny helikoptera. Ny saram ho an'ny banky-nanana vola chockhöjdes fitantanana. Nisy fitomboana toy izany tsy mitombina 1200 isan-jato. Banks foana hitaraina mafy ny lafo
fitantanana na dia ny tenany aza dia tena omena tsiny. Nandritra izany fotoana izany, dia tonga koa ny sampana banky cashless amin'ny nampahatahotra haingana. Ny varotra sy ny banky dia nitaraina mafy mikasika ny fomba fandoavam-bola, rehefa lafo vola raha ny marina, ara-toekarena isika amin'ny alalan'ny toppings mpanjifa mandoa izany.
Ny sisin'ny avgrundsdjupets ambany dia tonga tao amin'ny governemanta fifanarahana. Cash fitantanana saika namono tanteraka eo amin'ny alitara fandoroana ny tsy miankina. Koa satria efa tsikelikely Soeda mbola solafaka ao ambany fotaka nidina ho any amin'ny tanteraka cashless loza. Ny fanadihadiana ambanin'ny fanekena tsaboina governemanta vola ihany no tsingerin'ny fa tsy ny zon'ny olona toy izany sy hiala vola petra-bola any amin'ny banky. Misy safidy maharitra eo amin'ny vola sy ny karatra Toa tsy havela.
Ny manaraka mena-maitso rehetra governemanta nanaiky io fanasana io amin'ny fifanakalozan-kevitra avy amin'ny iray amin'ireo tena solontenan'ny ny fanakianana ny ankapobeny kontantlöshet. A mpanompo hodinihina izany fanasana rehetra liana antoko. Tamin'ity indray mitoraka ity, dia ny kontantlöskritiska solontena mba ho toy izany ny fiarovana sy ny orinasa rehetra ny Soeda dia tsy maintsy ho velona. Izany koa riksdagssak ny vola. Fa misy salama sy matanjaka nanova ny fiainako politika momba ny vola indrisy tsy azo amantarana izany. Ny marina voalaza mpitsikera tanteraka mankany amin'ny kontantlöshet no nampiseho ny vahaolana ny olana rehefa manoratra fa ny fanjakana dia tsy maintsy handray andraikitra indray ny vola.
Misy fikarohana dia nampiseho fa olona maro araka izay valo amin'ny folo olona te fitantanana ny vola dingana hitombo. Banks hoe mitombina hiarovana ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanesorana ny vola raha ny mpanjifa, kosa, saika mangataka ka tsy tokony hanana azy ireo any. Ny olona ho tsy mba nanakana ny cashless fananganana amin'ny hamonoana ny vola tanteraka ny rafitra. Amin'ny fananganana cashless midika voalohany indrindra ny Riksbank, telo lehibe banky, orinasa karatra ary tena lehibe anisan'ny politika, raharaham-barotra sy ny haino aman-jery. Ankoatra izany, ny sasany taloha Pop sampy. Miaraka amin'ny fanampian'ny ny lainga, sy ny antsasaky ny lainga manitatra no nitarika ny soedoà olona ho mitaingina. Avy eo aoriana izy, ankoatra ny zavatra hafa, ny ara-bola Etazonia izao tontolo izao sy ny lehibe sy ny banky carte de crédit orinasa.
Efatra lehibe "cashless Biby Goavam" (Mastercard, Visa, American Express sy fisakafoana hariva Club) no navela hahazo ny hanorotoro predominance ny Tandrefana ny vola. Tsy ny tenany ihany kontantlösheten izay ratsy fa koa ny rafitra ara-toekarena izay ao ambadiky io. Misy rafitra ara-tsosialy sy ny firenena maro no mijery azy io ho toy ny zavatra tsara fa ny toe-karena dia hihazakazaka Amoka tsy misy faneriterena. Izany dia hita ho toy ny salama rafitra filan-tena. Tokony fa azo ampitahaina olo-malaza sasany junkie ka mafy izy ireo indraindray teetering ny saika ny fahafatesana.
Ny lohatenin'ny boky na dia eo aza ny tsy momba ny tsikombakomba. Raha te-hanatsara ny tenany amin'ny fampianarana ireo dia ny ony ny vaovao any an-kafa. Mety ho lainga ny milaza fa ity boky ity no tanjona. Izany dia tena subjective sy manokana. Izany dia natao ho toy ny antso mafy ho an'ny tolona manohitra ny rafitra ara-bola marary kontantlösheten izay tena manan-danja. Mitanila eo amin'ny toerana eto amin'ny malalaka porofo fipetrahany izy. Tsy mety ny miezaka mba hahita ny soa azo avy amin'ny zavatra izay ifotony ratsy. Ity boky ity dia antso mba haka ny farany mololo.
Misy antony maro fa ny boky ho tonga. Fa ny lehibe indrindra antony sy ny mololo izay nanapaka ny rameva ny indray dia hoe ny ankamaroan 'ny banky dia tsy mahazo vola ao amin'ny banky, ary dia cashless. Raha toa ny ankamaroan'ny banky mbola efa namela antsika mba hiala vola any amin'ny banky ka nanana boky ity dia tsy lasa. Efa samy mahafinaritra sy manan-danja mba hanoratra ilay boky. Fa famporisihina lehibe iray hafa ho an'ny soratra ihany koa ny fahatezerana sy ny fahadisoam-panantenana noho ny fitondran-tena ny iray mihatsaravelatsihy sy tsotra cashless toerana. Ny mpanoratra maniry hahafantatra, ary maro aingam-panahy hevitra fanoherana ny riaka kontantlöshet tany Soeda.
Ny cashless fironana sy ny fivoaran-draharaha avy amin'ny vola mandeha mampino izany haingana. Ihany tamin'ny faran'ny fanompoam-boky, ny zavatra manan-danja mitranga izay tsy tonga miaraka amin'ny boky. Ny mpanoratra nenina momba ny zava-dehibe sasany ny zavatra ho avy ao amin'ity boky ity. Fa tsy maintsy ihany koa ny manoratra intsony amin'ny fotoana mety. Inona no mahafinaritra sy mahafa-po tokoa ny manoratra ny boky, dia satria ny tanjona fa olona maro araka izay azo atao ny mamaky azy io.
Kontantlösheten ny aretina ara-tsosialy tsy mbola nisy toa ratsy indrindra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Tanteraka mifandray amin'ny ideolojika mandoa, vay, mucus, pus, mena maso sy nandeha ra anaty. Tafahoatra ny olona izay te-hamelatra kontantlöshet dia toy ny areti-mandringana izay mampivondrona ny tena lehibe eo am-bavan'ny Goba, ary avy eo dia handrora ary sneeze ny uninfected mivantana teo amin'ny tarehiny. Raha tokony ho fanampiana nandrora na hiala tsiny fa miandry amim-paharetana kontantlöse ho nisaotra. Na dia olona tena ratsy ny kontantlöshet hahita izany "araka ny voasoratra ao amin'ny kintana" izy ireo, satria mihevitra fa tsy misy dikany ny na dia miezaka ny hiady izany. Ity boky ity dia te-hampiseho fa afaka ary tokony hiady ny cashless fiaraha-monina.
Ilay boky dia vita tamin'ny ny anjara-andron'i 2015/16. Mpanoratra-kafaliana any ho any ao Soeda. Ny boky dia natokana ho soedoà ny ankizy rehetra embellish ainy ho antsika olon-dehibe. Izany dia tsy voasoratra ho an'ny ankizy mba hamaky azy io, fa ny hanao zavatra fa manana ny ho avy ho toy ny olona afaka, raha mbola araka izay azo atao.
To be foana.